မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က ဒီလုိုတွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်...! - Thadin
HomeHEALTHYမအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က ဒီလုိုတွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်…!
June 11, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on မအိပ်တဲ့ အချိန်တွေများလာတဲ့ အခါ သင့်ခန္ဒာကိုယ်က ဒီလုိုတွေပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မယ်…!
တစ်ညတာအိပ်မပျော်ပြီးနောက် ၆နာရီကြာသောအခါ –
တစ်ညလုံးမအိပ်ရသောအခါ သင့်ကိုယ်ထဲမှာ ကော်တီစောလို့ခေါတဲ့ ဟိုမုန်းများမြင့်တက်လာပါတယ်။ထိုဟိုမုန်းကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများလာပြီး စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊စိတ်တိုခြင်း၊စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ ခံစားရပါတယ်။
ဦးနှောက်ကနေ တစ်စုံတစ်ခုကိုတုံ့ပြန်ချိန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်တွေ နှေးကွေးလာပါတယ်။ဒါပေမယ့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ပြောင်းပြန်နည်းစဉ်စတင်လာပြီး သင်ဟာပင်ပန်းရမယ့်အစား ပိုတောင်လန်းပြီး အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ စွမ်းအင်များတဟုန်ထိုးများပြားလာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အာရုံခံစားမှုကောင်းမွန်လာပြီး သင့်စိတ်ကြည်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သင့်အိပ်ရေးပျက်မှုကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် ဦးနှောက်ကနေ ဒိုပါမင်း ဟိုမုန်းကို မြင့်တက်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
-သင့်မှတ်ဉာဏ်အားနည်းလာပြီး တစ်ခုခုကိုတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကျဆင်းလာပါပြီ၊ဒါဟာ ဦးနှောက်အနေနဲ့ စွမ်းအင်ကိုချွေတာနေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ နောက်တစ်ရက်လောက်ထပ်မအိပ်မိပါက သင့်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အတော်ကြောက်စရာကောင်းနေပါပြီ။သင်ဟာ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ စတင်ကြုံတွေ့ရပါတော့မယ်။ တကယ်မရှိတာတွေကို ရှိတယ်မြင်ရပြီး မရှိတဲ့အသံတွေ ကြားနေရမှာပါ။ထို့ပြင် ဦးနှောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ်တွေချိူ့တဲ့နေပြီဖြစ်လို့ စိတ်ရောဂါလက္ခဏာမျိူးတောင် ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်နာမည်တောင်သင်မမှတ်မိတာမျိူးအစာကိုဘယ်လိုစားရမလဲမသိတာမျိူးတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
-ပင်ကိုယ် စိတ်အခြေအနေကောင်းမွန်ပြီးသား မည်သူမဆို ၁၁ရက်ခန့်မအိပ်ပဲ မနေနိုင်ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံ San Diegoပြည်နယ်တွင် ၁၉၆၄ခုနှစ်က ၁၇နှစ်အရွယ် ကျောင်းသားတစ်ဦးကို စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကို ၂၆၄နာရီကြာမအိပ်စက်ခိုင်းပါဘူး၊ထိုအချိန်ဟာရက်ပေါင်း၁၁နဲ့ညီမျှပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ ၁၁ရက်ထိတော့မအိပ်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်ပေမယ့် ဦးနှောက်ကိုဘယ်လောက်ထိ ပျက်စီးမယ်ဆိုတာတော့ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ညအိပ်ရေးပျက်ခံသူများအနေနဲ့ မိမိကျန်းမာရေးကိုအလေးထားသင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Writer – Dr Jue ( Daily Hot News)
တဈညတာအိပျမပြျောပွီးနောကျ ၆နာရီကွာသောအခါ –
တဈညလုံးမအိပျရသောအခါ သငျ့ကိုယျထဲမှာ ကျောတီစောလို့ခေါတဲ့ ဟိုမုနျးမြားမွငျ့တကျလာပါတယျ။ထိုဟိုမုနျးကွောငျ့ စိတျဖိစီးမှုမြားလာပွီး စိတျရှုပျထှေးခွငျး၊စိတျတိုခွငျး၊စိုးရိမျပူပနျခွငျးတို့ ခံစားရပါတယျ။
ဦးနှောကျကနေ တဈစုံတဈခုကိုတုံ့ပွနျခြိနျနဲ့ဆုံးဖွတျခကျြခခြိနျတှေ နှေးကှေးလာပါတယျ။ဒါပမေယျ့နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာတှကေိုတော့ဆောငျရှကျနိုငျပါသေးတယျ။
ပွောငျးပွနျနညျးစဉျစတငျလာပွီး သငျဟာပငျပနျးရမယျ့အစား ပိုတောငျလနျးပွီး အလုပျပိုလုပျနိုငျပါသေးတယျ။ စှမျးအငျမြားတဟုနျထိုးမြားပွားလာလို့ဖွဈပါတယျ။ သငျ့အာရုံခံစားမှုကောငျးမှနျလာပွီး သငျ့စိတျကွညျနပေါလိမျ့မယျ။ဒါဟာဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ သငျ့အိပျရေးပကျြမှုကို ပွနျလညျဖွညျ့ဆညျးဖို့အတှကျ ဦးနှောကျကနေ ဒိုပါမငျး ဟိုမုနျးကို မွငျ့တကျစလေို့ဖွဈပါတယျ။
-သငျ့မှတျဉာဏျအားနညျးလာပွီး တဈခုခုကိုတုံ့ပွနျနိုငျတဲ့စှမျးရညျကဆြငျးလာပါပွီ၊ဒါဟာ ဦးနှောကျအနနေဲ့ စှမျးအငျကိုခြှတောနရေလို့ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့သငျဟာ နောကျတဈရကျလောကျထပျမအိပျမိပါက သငျ့ခန်ဓာအစိတျအပိုငျးတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ကဆြငျးသှားနိုငျပါတယျ။
အတျောကွောကျစရာကောငျးနပေါပွီ။သငျဟာ ထငျယောငျထငျမှားတှေ စတငျကွုံတှရေ့ပါတော့မယျ။ တကယျမရှိတာတှကေို ရှိတယျမွငျရပွီး မရှိတဲ့အသံတှေ ကွားနရေမှာပါ။ထို့ပွငျ ဦးနှောကျအတှကျမရှိမဖွဈလိုအပျသော အာဟာရဓာတျတှခြေိူ့တဲ့နပွေီဖွဈလို့ စိတျရောဂါလက်ခဏာမြိူးတောငျ ရငျဆိုငျနရေပွီဖွဈပါတယျ။ သငျ့နာမညျတောငျသငျမမှတျမိတာမြိူးအစာကိုဘယျလိုစားရမလဲမသိတာမြိူးတှေ ဖွဈလာမှာပါ။
-ပငျကိုယျ စိတျအခွအေနကေောငျးမှနျပွီးသား မညျသူမဆို ၁၁ရကျခနျ့မအိပျပဲ မနနေိုငျပါဘူး။အမရေိကနျနိုငျငံ San Diegoပွညျနယျတှငျ ၁၉၆၄ခုနှဈက ၁၇နှဈအရှယျ ကြောငျးသားတဈဦးကို စမျးသပျမှုပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။သူ့ကို ၂၆၄နာရီကွာမအိပျစကျခိုငျးပါဘူး၊ထိုအခြိနျဟာရကျပေါငျး၁၁နဲ့ညီမြှပါတယျ။ လူတဈယောကျဟာ ၁၁ရကျထိတော့မအိပျပဲနနေိုငျတယျဆိုတာ သကျသပွေနိုငျပမေယျ့ ဦးနှောကျကိုဘယျလောကျထိ ပကျြစီးမယျဆိုတာတော့ သငျမသိနိုငျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ညအိပျရေးပကျြခံသူမြားအနနေဲ့ မိမိကနျြးမာရေးကိုအလေးထားသငျ့ကွောငျး တငျပွလိုကျပါတယျ။
This Year : 278565
Total Users : 637589